सिल्टल इस्लामाबाद विशेषज्ञ: किन वेबसाइटहरू र खोज इन्जिनहरू वेब क्रॉलरहरू प्रयोग गर्छन्?
वेब क्रल गर्ने प्रक्रियालाई वेब क्रेलरहरूको प्रयोगको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ खोज इञ्जिन अनुकूलन।
त्यसैले वेब क्रलर के हो? माइकल ब्राउन, ग्राहक सफलता प्रबन्धक सेल्टल्ट , बताउँछ कि वेब क्रलर एक स्क्रिप्ट कार्यक्रम हो जुन वेब ब्राउज गर्न को लागी खोज इन्जिन द्वारा स्वचालित रूप देखि र विधि रूप मा प्रयोग गरिन्छ। एउटा वेब क्रलर खोजीमा सबै शीर्ष नतिजाहरू मिलाउन खोज इन्जिन द्वारा प्रयोग गरिन्छ। यसले प्रयोगकर्ताहरू छविहरू, वा छविहरू, भिडियो, अडियो, समाचार, पहेँलो पृष्ठहरू र सेतो पृष्ठहरूको विकल्पहरू प्रदान गर्दछ। वेब क्रलरहरू पनि वेब मकड़ी वा खोजी इन्जिन रोबोटको रूपमा पनि उल्लेख गरिन्छ।
वेब क्रॉलर को भूमिका (1 9)
वेब क्रलरले खोजी इञ्जिनमा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यो खोज इन्जिन कुशलतापूर्वक काम गरिरहेको छ सुनिश्चित गर्न विभिन्न भूमिका निभाउँछ। प्रत्येक खोजी इन्जिनले धेरै कारणहरूको लागि वेब मकवानहरूको उपयोग गर्न आवश्यक छ। वेब क्रलरका भूमिकाहरू समावेश छन्।
डाटा प्रदान गर्नुहोस्। धेरै वेब साइटहरु र खोज ईन्जिनियहरुको लागी वेब क्रलरहरूले तिनीहरूलाई हरेक अन्य वेबसाइटबाट नवीनतम डेटा प्रदान गर्दछ। वेब क्रलरले सबै जानकारी खोजीमा मर्ज गर्न सक्षम छ।
सबै भ्रमण गरिएका पृष्ठहरूको प्रतिमा सिर्जना गर्नुहोस्। यो वेब क्रलरहरूको एक महत्त्वपूर्ण भूमिका हो। सबै भ्रमण गरिएका पृष्ठहरूको प्रतिलिपि गर्ने क्षमताले खोजी इञ्जिनमा छिटो खोजीहरूको सुविधामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसैले, आफ्नो नवीनतम खोजीहरू र वेबमार्फत सबै जानकारी प्रदान गर्न सक्षम हुन सक्दछ। वेब क्रेलरद्वारा डाउनलोड गरिएका वेब पृष्ठहरू खोज इन्जिनहरूद्वारा खोजी गति बढाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ।
खोज इन्जिन सूचकांक प्रविष्टिहरू सिर्जना गर्नुहोस्। एक वेब क्रलर सामान्यतया वेबमा क्रल गर्दछ र सबै वेबसाइटहरूको जानकारी र अन्य विवरणहरू पढ्दछ। त्यसपछि यो डेटा प्रयोग इन्जिन सूचकांक प्रयोग गर्दछ।
अनुक्रमणिका निर्माण र संशोधन गर्नुहोस्। सबै वेबसाइटहरू र उनीहरूको वेबपेजहरूमा जाँदा, अन्तमा, वेब क्रलर घर फर्काउँछ। एक पटक यो घर फिर्ता भएपछि, एकत्रित जानकारी खोज इन्जिन द्वारा संशोधन गर्न र खोजी अनुक्रमणिका निर्माण गर्न प्रयोग गरिनेछ। यो याहू र गुगल जस्ता धेरै इन्जिनहरू यस उद्देश्यका लागि वेब मकवानहरू प्रयोग गर्छन्।
एचटीएमएल कोड मान्य गर्न वेबसाइटहरूमा स्वचालित रखरखाव कार्यहरू, विभिन्न वेबसाइटहरूबाट सबै प्रकारका जानकारीहरू इकट्ठा गर्न र लिङ्क जाँच गर्न वेबसाइटहरू वेब क्रलरहरू प्रयोग गर्छन्। यो सबै जानकारी जम्मा गर्ने क्षमता वेबसाइटको रखरखावको लागि महत्त्वपूर्ण छ। यदि साइटले एक वेब मकड़ी प्रयोग गरिरहेको छ भने, वेब स्पाइडरले जानकारी बृद्धि गर्दछ स्वचालित रूपमा वेबसाइट वा खोजी इन्जिनमा अद्यावधिक हुन्छ। सबै सम्बन्धित खोजहरू पनि अपडेट हुनेछन् भन्ने मतलब साइट साइटमा सधैँ वेबमा जानकारीको हरेक विवरणको साथ अद्यावधिक हुने छ।
एक वेब क्रलर द्वारा एकत्रित जानकारी वेबसाइटहरु सूचकांक मा प्रदर्शित डेटा को लागी निर्धारित छ। हरेक खोजी इन्जिन र वेबसाइटले उनीहरूको वेब क्रॉलरलाई सबै जानकारी जम्मा गर्न र अद्यावधिक राख्नमा निर्भर गर्दछ। उनीहरूको वेब क्रलरहरू एकत्रित हुँदै उनीहरूको प्रासंगिकता धेरै तयारीमा छ। खोज को समयमा प्रदर्शित वेबसाइटहरु बाट crawlers द्वारा एकत्रित जानकारी द्वारा निर्धारित गरिन्छ। वेब क्रलर यो सुनिश्चित गर्दछ कि जब खोजी सुरु हुन्छ, खोजी इन्जिनले जानकारीको प्रत्येक एक टुक्रा प्रदान गर्दछ जुन खोजीमा सान्दर्भिक किन्नका लागि सम्बन्धित छ।
. Source - ???? ray ban ?????? ???????